Uyenza njani iincwadana kwi-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyenza njani iileta kwi-twitter?
Epreli 27, 2021 0 IiCententarios 440
Ngokufika kwe-twitter ngo-2006, indlela yothungelwano ye-nanoblogging yaguqulwa, kwaye nangaphezulu kwe-390 yezigidi ezingamalungu, izinzile njengenye yeendlela ezikhawulezayo zonxibelelwano ezikhoyo.
Kule minyaka idlulileyo, le nethiwekhi ihlaziyiwe ngohlaziyo ngalunye. Eyokugqibela kukukwazi kwabasebenzisi ukwenza iileta zeendaba. Oku kufezekisiwe ngokuthengwa kweRvue yi-twitter.
Ukuhlaziywa liqonga lokuyilwa kweeleta okanye iibhulethini ezinolwazi. Ngokuthengwa kweRevue, i-twitter izimisele ukuthumela iincwadana ngeqonga layo. Lo msebenzi mtsha uvumela iintatheli kunye nemithombo yeendaba ukuba zenze ingeniso eyongezelelweyo.
I-Twitter ifumana iqonga njengendlela apho abasebenzisi baziswa khona ngokweminqweno yabo, apho naluphi na uhlobo lomrhumo lunokufikelela kwaye lunokwenza imali ngokupapashwa. Ngalencwadana, unokwahlulahlula icandelo ekujoliswe kulo kunye nendlela yokufikelela kubo.
Uqala njani ukwenza iincwadana?
Fikelela iprofayile yakho twitter
Uyakufumana ukhetho lwencwadana yeendaba kwicala lasekhohlo lexesha lakho lexesha. Kwimeko apho ungena kwiqonga lewebhu, kuya kufuneka uye "kukhetho oluninzi". Ukuba uqhagamshela kwi-app, ungayifumana ngefoto yakho yeprofayile ngaphezulu kwexesha lakho.
Cinezela "fumana okungakumbi" icon. Ngokukhawuleza emva koko, i-twitter iya kusihambisa kwiphepha leRevue.
KwiRevue, kufuneka siqale nge icon "ukuqala incwadana entsha" le yinkqubo yasimahla.
Kuya kufuneka ubhalise kwiphepha lokuHlaziya kunye nomsebenzisi, iphasiwedi kunye nelizwe lokuhlala.
Qalisa ukwenza incwadana yeendaba
Eli phepha liya kukukhokela kuyo yonke inkqubo, nangona oku kulula. Embindini wephepha yibhokisi yokubhaliweyo.
Emazantsi uza kufumana ii icon ezahlukeneyo ukongeza amacandelo, isicatshulwa, amakhonkco, iividiyo, imifanekiso kunye neetweets.
Kwicala lasekunene lesikrini uza kubona iitweets zakho ozenzileyo. Kuyenzeka ukuba uqhagamshele kwezinye iinethiwekhi zentlalo ngokusebenzisa i icon enamachaphaza amathathu ebekwe kwicala lasekunene lesikrini.
Ngelixa uyila incwadana, uya kuba nakho ukubona imboniso yayo kwi "preview" icon kwikona esezantsi ekunene kwesikrini.
Xa ugqibile ukwenza incwadana yeendaba, yiya ku "cwangcisa umba" ukucwangcisa ukuhanjiswa. Kule nto kufuneka unxibelelane noluhlu lwababhalisi.
Olu luhlu lunokwenziwa ngesandla okanye kungeniswe ngaphandle kwifayile ye-csv.
Emva koku, qhubela phambili ukuhambisa. Khetha imithombo yeendaba oza kuyisebenzisa.
Phezulu ephepheni unokujonga ababhalisile, kunye necandelo elibizwa ngokuba "kukuqonda", apho ungabona khona ukusebenza kwegama lakho iileta zeendaba.
Zijongeka njani iincwadana zethu kwi-twitter?
Ezi ncwadi zeendaba ziya kubonakala ngathi nayiphi na i-tweet kubalandeli bakho. Ikhonkco liya kufumaneka kuyo ukuze bakwazi ukufikelela kwincwadana.
1 Yintoni i-revue?
2 Uqala njani ukwenza iincwadana?
2.1 Ukufikelela kwakhona
3 Qalisa ukwenza incwadana yeendaba
4 Zijongeka njani iincwadana zethu kwi-twitter?
Uyenza njani iminxeba yelizwi yasimahla kwiTelegram?